Cilmi Baadhayaal loo diray si ay soo badhaan biyo ka dilaacay qaybo kamida magaalada Borama. | Radio Borama
You are here : Radio Borama » News » Cilmi Baadhayaal loo diray si ay soo badhaan biyo ka dilaacay qaybo kamida magaalada Borama.
Cilmi Baadhayaal loo diray si ay soo badhaan biyo ka dilaacay qaybo kamida magaalada Borama.
Posted by admin on December 8th, 2018 08:52 AM | News
Borama(SBN)Guddoomiyaha Gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali (Cabdi Shaqaabe) ayaa tilmaamay in loo diray Cilmi baadhis lagu hubinayo waxaa ay yihiin biyo qadhaadh oo xaafaddo ka mid ah magaallada Boorama looga qaxay.
Guddoomiyaha oo shalay Waraysi gaar ah siiyay saxaafada waxaa uu tilmaamay in dhamaan laamihii ay khusaysay ee dawladda Somaliland iyo hay’adaha caalamiga ahba goobta la geeyay, Islamarkaana biyihii la qaaday si soo baadho. “Biyahani, xaafaddo dhan ayay baro-kiciyeen. Dawladda hoose waa ku hawlan tahay sidii loogu sameyn lahaa saaqiyaddo. Mida kale, si loo hubiyo biyahani waxaa ay yihiin waxaanu isugu keenay hay’addihii ay khusaysay dawladda Somaliland iyo hay’adaha caalamiga ahba. Waana la qaaday si loo soo baadho.” Ayuu yidhi Guddoomiyuhu. Waxaana uu xaqiijiyay in dedaalka hawshani socdo, balse waxaa uu ka gaabsaday inuu ka hor dhaco baadhista sida uu sheegay oo uu u magacbixiyo waxaa ay u maleeyeen.
Bulshada ku dhaqan magaalada Boorama ayaa cabsi kala kulantay biyahan dhulka ka soo baxaya oo noqday durdur magaalada dhex socda oo qadhaadh.
Guryo badan ayaa ilaa hal miitir hoosta ka qoyay oo dadkii lahaa ka cabsi qabaan in ay ku dumaan.
Magaaladan oo hore loogu yaqaanay dhulgariir ka soo bilaamba buurta SAW ayay biyahani shaki kale ku sii biiriyeen. Maadaama aan illaa hadda la aqoon san halka ay biyuhu ka imanayaan. Ka sokow dhul-gariir soo noqnoqda, khuburadda amuurahan ku talaxtagtay ayaa aaminsan in Isbedel laxaad lehi ku soo fool leeyahay dhulkan, islamarkaana ay Qaaradda Afrika u kala qaybsamayso laba, iyadda oo inta badan dhulka Soomaalidu degtaa ka go’ayo qaaradda inteedda kale, taas oo malaayiinkii sanadoodba mar dhacda. Waxaana tan sii muujiyay ka dib markii dhawaan (March 30 2018) qaybo ka mid ah dhulka Kenya ee Dooxada loo yaqaanno Rift vallay uu go’ay iyaddoo dhulkaas go’ay qiyaastii ahaa balac ahaan ilaa 50 cagood, halka dhererkana uu ahaa dhowr Kilo Mitir. Waxaana la wariyay in laagtaasi isaga gudubto Kenya, Ethiopia ilaa Djibouti.
« Daawo Wararkii ugu danbeeyay qaraxii jijiga iyo Mid ka mid madaxwaynayashii hore ee kililka oo Tvga Axmaarigu sheegay inuu ku lug lahaa Qaraxyada
Maxaa kajira in Madaxweyne Biixi Isku Shaandhayn Sal Balaadhan Samay nayo iyo Tirada Wasiirada La Filaayo In Xilka Laga Qaado »